Dhageyso Falanqeyn Ku Saabsan Filimka Ay Soo Saartay Al-Kata’ib. – Shabakadda Amiirnuur
Dhageyso Falanqeyn Ku Saabsan Filimka Ay Soo Saartay Al-Kata’ib.
February 10, 2019 7:17 am by admin Views: 161
Mu’asasada Al-Kataa’ib oo ah garabka warbaahineed ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay baahisay muuqaal Vedio- ah oo lagu soo bandhigay dilal qorsheysan oo Muqdisho ka dhacay iyo weeraro kale oo qaar kamid ah gobolada dalka lagula beegsaday ciidamada shisheeye.
Filim loogu magacdaray qeybta labaad ee Aflaxal Wajh, ayay baahisay m’assasada Al-kataa’ib, waxaana lagu soo bandhigay qeyb kamid ah howlgallada ay fuliso guutada Muxamed bin Maslama oo si firfircoon uga howlgasha qeybo badan oo kamid ah dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho.
Muuqaalka waxaa la daawan karaaa 11 daqiiqo iyo qadar secoonno ah, waxaana lagu soo bandhigayaa dilal dharaar cad wadooyinka iyo xaafdadaha kala duwan ee Muqdisho loogu geysanayo saraakiil, xillibaano iyo xubno muhiim ah oo katirsan dowladda federaalka.
Xubnaha ugu caansan ee iyadooo la tooganayo lagu soo bandhigay filimka waxaa kamida h gaashaanle sare Maxamed Cabdi cilmi oo katirsan waaxda CID-da, Cali Maxam’ed Cabdi oo ahaa xillliban katirsana dowladdii Xasan Sheekh, Nuur kheyr oo kamid ahaa ergada soo xushey xillibaanada baarlamaanka Galmudug, Cabdi Cusmaan oo ahaa sarkaal katirsan waaxda Canshuuraha ee wasaaradda maaliyadda.
Halkan ka dhagayso Warbixin ku saabsan Filimka Aflaxal Wajh 2
Halkan ka dhagayso Falanqeyn ku saabsan filimka oo ay ka qeybgalayaan Wariyaal katirsan Idaacaddda Al-Furqaan.
Isha Maqalka: Radioalfurqaan.com